I-TOKYO OTA OPERA PROJECT2021 | Umbutho Wokukhuthaza Inkcubeko kwiWadi
Dibana nobuncwane be-opera chorus ~
Ikonsathi ye-Opera Gala: Ukuphinda kugaywe kwakhona amaLungu eChorus
Umbutho Wokukhuthaza Inkcubeko kwiWadi ye-Ota uqhuba iprojekthi ye-opera iminyaka emithathu ukusukela ngo-2019.
Ngo-2020, sasingenakukhetha ngaphandle kokubamba ukusebenza ukukhusela usulelo olutsha lwe-coronavirus. Kwi-2021, siza kuphinda sigxile kwi <vocal music>, eyona nto iphambili kwi-opera, kunye nokuphucula izakhono zokucula.
Siza kucela umngeni kwiilwimi zantlandlolo (isiTaliyane, isiFrentshi, isiJamani) kwi-opera nganye.Masonwabele uvuyo lokucula kunye nobungangamsha bekwayara ye-opera ngesandi seokhestra kunye neemvumi zeopera ezithandwayo.
Abo bangaphezulu kweminyaka eli-15 ubudala (ngaphandle kwabafundi bezikolo zamabanga aphakamileyo)
Abo banokuthatha inxaxheba ekuziqhelaniseni bengaphumli
Abo banokufunda umculo
Abo banako ukukhumbula
Abo balungele iimpahla
Amadoda: amaqhina amnyama kunye nokunxiba okusesikweni
Abafazi: I-blouse emhlophe (imikhono emide, uhlobo olucwebezelayo), isiketi esimnyama esimnyama (ubude bebonke, umgca we-A)
* Izambatho ziya kuchazwa ngexesha lokuziqhelanisa, ke nceda ungathengi kwangaphambili.
Amaxesha angama-20 ewonke (kubandakanya iGenepro kunye nemveliso)
Amanye amazwi ababhinqileyo nabesilisa
* Ukuba inani labenzi-zicelo lingaphezulu komthamo, iLotto iya kunikwa abo bahlala, basebenzayo, okanye bafunda esikolweni e-Ota Ward phakathi kwabafaki-zicelo kwinxalenye yokuqala yokukhetha.
I-20,000 yen (ifakiwe irhafu)
* Indlela yokuhlawula kukudlulisa ibhanki.
* Iinkcukacha ezinje ngendawo yokutshintshela ziya kubhengezwa kwisaziso sokuthatha inxaxheba.
* Nceda uqaphele ukuba asiyamkeli intlawulo yemali.
* Nceda uthwale umrhumo wokudlulisa.
Umqhubi weChorus: UTetsuya Kawahara
Isikhokelo seChorus: Kei Kondo, Toshiyuki Muramatsu, Takashi Yoshida
Imiyalelo yolwimi loqobo: Kei Kondo (waseJamani), Pascal Oba (French), Ermanno Alienti (Italian)
URépétiteur: Takashi Yoshida, Sonomi Harada, njl.
Bizet: "Habanera" "Ingoma yeToreador" evela kwiopera "Carmen"
I-Verdi: "Yonwabela Ingoma" evela kwi-opera "La Traviata"
I-Verdi: Ukusuka kwi-opera "uNabucco" "Hamba, iingcinga zam, ukhwele kumaphiko egolide"
I-Strauss II: "I-Chorus yokuvula" "Ingoma yeChampagne" evela ku-Operatta "Die Fledermaus"
Lehar: "Ingoma yeVilia", "iWaltz", njl. Ukusuka kwi-operetta "Umhlolokazi ongumhlolokazi"
* Iinkcukacha zamanqaku ziya kubhengezwa kwisaziso sokuthatha inxaxheba.
Kufuneka ufike ngo-2021: 1 ukusuka nge-8 kaJanuwari (ngolwesiHlanu) ukuya nge-2 kaFebruwari (ngeCawa), ngo-14　Umhla wokugqibela wesicelo uvaliwe.
* Izicelo emva komhla wokugqibela azinako ukwamkelwa.Nceda ufake isicelo ngomda.
Nceda ucacise izinto eziyimfuneko kwifom yesicelo emiselweyo (fakela ifoto) uze uyipose okanye uzise eOta Citizen's Plaza (Ota Citizen's Plaza / Ota Citizen's Hall Aplico / Ota Bunkanomori).
I-3-1-3 Shimomaruko, Ota-ku, eTokyo ngaphakathi kwe-Ota Citizen's Plaza
(Umdla woluntu ufakelwe isiseko) I-Ota yeQela eliKhuthaza iNkcubeko kwiQela eliKhuthaza ubuGcisa beNkcubeko
Abasebenzi bokugaya amalungu e-chorus adibana ne-opera chorus
Nje ukuba uhlawulwe, umrhumo wokuthatha inxaxheba awuyi kubuyiselwa phantsi kwazo naziphi na iimeko.Qaphela oko.
Asinakuphendula imibuzo malunga nokwamkelwa okanye ukwaliwa ngefowuni okanye nge-imeyile.
Amaxwebhu esicelo awasayi kubuyiselwa.
Malunga nokuphathwa kweenkcukacha zakho
Ulwazi oluyimfihlo olufunyenwe sesi sicelo "sisiseko soluntu" soMbutho wokuKhuthaza iNkcubeko yeWadi yeOta.プ ラ イ バ シ ・ ポ ー ーIya kulawulwa ngu.Siza kuyisebenzisa ukunxibelelana nawe malunga neli shishini.
Ifom yesicelo @ ukuqeshwa kwelungu
Malunga neshedyuli kunye nendawo yokuziqhelanisa de kube kusebenze owona msebenzi
1 4 / 10 (ngoMgqibelo) 18: 15-21: 15 Iholo encinci yeOta Ward Plaza
2 4/25 (Ilanga) 18: 15-21: 15 Iholo encinci yeOta Ward Plaza
3 5/7 (ngolwesiHlanu) 18: 15-21: 15 Iholo encinci yeOta Ward Plaza
4 5 / 15 (ngoMgqibelo) 18: 15-21: 15 Iholo encinci yeOta Ward Plaza
5 5 / 22 (ngoMgqibelo) 18: 15-21: 15 Iholo enkulu yeOta Ward Plaza
6 6/4 (ngolwesiHlanu) 18: 15-21: 15 Iholo enkulu yeOta Ward Plaza
7 6/13 (Ilanga) 18: 15-21: 15 Iholo enkulu yeOta Ward Plaza
8 6/20 (Ilanga) 18: 15-21: 15 Iholo encinci yeOta Ward Plaza
9 6/25 (ngolwesiHlanu) 18: 15-21: 15 Iholo enkulu yeOta Ward Plaza
10 7 / 3 (ngoMgqibelo) 18: 15-21: 15 Iholo enkulu yeOta Ward Plaza
11 7/9 (ngolwesiHlanu) 18: 15-21: 15 Iholo encinci yeOta Ward Plaza
12 7/18 (Ilanga) 18: 15-21: 15 Iholo enkulu yeOta Ward Plaza
13 7 / 31 (ngoMgqibelo) 18: 15-21: 15 Iholo enkulu yeOta Ward Plaza
14 8/8 (Ilanga) 18: 15-21: 15 Iholo encinci yeOta Ward Plaza
15 8/13 (ngolwesiHlanu) 18: 15-21: 15 Iholo encinci yeOta Ward Plaza
16 8/15 (Ilanga) 18: 15-21: 15 Iholo enkulu yeOta Ward Plaza
17 8 / 21 (ngoMgqibelo) 18: 15-21: 15 Iholo encinci yeOta Ward Plaza
18 8/27 (ngolwesiHlanu) 17: 30-21: 15 IHolo yeWadi yeWta / iHolo enkulu yeAplico
19 8 / 28 (ngoMgqibelo) Ukuqhelaniswa kweQonga IHolo yeWadi yeWta / iHolo enkulu yeAplico
20 8/29 (Ilanga) Usuku lokuvelisa IHolo yeWadi yeWta / iHolo enkulu yeAplico
Dibana ne-gem ye-opera chorus-Opera Gala Concert: Kwakhona
Nge-8 ka-Agasti (ngeLanga) ukuqala kwe-29: 15 (00: 14 ukuvula)
Zonke izihlalo ezibekelwe ii-yen ezingama-4,000
Umqhubi: Maika Shibata
Iokhestra: Iokie ye-Orchestra yaseTokyo yeHlabathi
ISoprano: uEmi Sawahata
IMezzo-soprano: Yuga Yamashita
UTenor: UTetsuya Mochizuki
IBaritone: UToru Onuma
Ukubhalwa kweskripthi: Misa Takagishi
Umvelisi / uRépétiteur: Takashi Yoshida